Alingashaywa indiva igalelo londlunkulu | News24
Alingashaywa indiva igalelo londlunkulu
NJENGOBA sigoqa inyanga yabantu besifazane, beziningi izinhlelo ebezikhona ezweni lonkana ebezibungaza lenyanga kaNcwaba.
Esingakuqaphela ngalemijikelezo yemigubho kanye nemicimbi ehlukahlukene ukuthi ibiyenzeka emadolobheni aphambili nasezindaweni zomtakabani lapho ingqephu , izibiliboco kanye nobukhazikhazi kuhamba phambili, impela kube inyanga yemicimbi yodidi oluphezulu exhaswe uhulumeni kanye nezinkampane ezizimele.
Kodwa kusenesikhalo esikhulu ngokushaywa indiva kwabesifazane abasezindaweni zasemakhaya okungekho zinhlelo ezitheni zokuthuthukisa abasimame abahlala khona.
Kulengosi yethu lapho sibheka khona abantu baseMgungungundlovu abangadumile futhi abangekho ezikhundleni eziphezulu kepha abenza umehluko ezindaweni okanye emphakathini abayakhele.
Sithe ake sibheke Igalelo loNdlunkulu baMakhosi esizwe, imisebenzi abayenzayo kanye nezingqinamba abahlangabezana nazo njengoba beseqhulwini ekuthuthukisweni kanye nokwelekelela abesifazane esizweni esenganyelwe abayeni babo Amakhosi.
Sixoxisane noNdlunkulu wesizwe sakwaMdluli kaNyavu ngaphansi kwenkosi uNdabezitha u-SE Mdluli endaweni yaseMkhambathini ngaphansi kwesifunda saseMgungundlovu.
OkaGatsheni sixoxisane naye emcimbini wokuvakasha koNyazi esigodlweni sasoPhokweni nalapho kade metasa belungisa njengoba iNkosi uMdluli nomndeni wakhe bekhonza khona kwaShembe.
Ekhulumisana nengosi uNdlunkulu Mandlovu ongowokudabuka kwaXimba eMvini khona eMkhambathini uthe ukuba uNdlunkulu kunezinselelo eziningi kakhulu njengoba kuba kunguye ohlezi emukela izingqinamba zabantu besifazane esizweni sonkana nokuyaye kube lula kubantu besifazane ukumvulela isifuba ngezinkinga abanazo bese kube wuye ozethula kuNdabezitha.
Uqhube wathi ngesinye isikathi kuyaye kube izinkinga ezidinga isixazululo ngokushesha okwenza kube semahlobe akhe ukuletha isixazululo esiphathumayo.
“Ngesinye isikhathi kuyaye kube izinkinga ezifana nokubikwa kosizi lwasendlini njengokushoda ngokudla okuyinto okulula ukuthi ngithathe kokuncane enginako, kepha ngesinye isikhathi kuyaye kube izinkinga ezinkulu ezifana nokuhlunkunyezwa kanye nezinkinga zasemndenini, okujike kube wumsebenzi wami ukududuza noma ukwehlisa ulaka kulowo olethe inkinga ukuze noBaba akwazi ukumlalela..” kuchaza uNdlunkulu esho nokuthi alukho uqeqesho abalutholayo ukubalekelela ekusizeni ngezeluleko kwalaba abadinga usizo emphakathini.
Eqhuba uthe ziningi izinhlelo ezinhle abanazo zokufukula nokuthuthukisa abantu besifazane ezindaweni zaMakhosi kepha inkinga kuyaye kube unkungabinazo izinsiza kanye noxhaso njengoba ukuhlanganisa abantu sekwaba nezindleko .
Uthe endaweni yaseMkhambathini kanye nezinye izindawo ezisemakhaya ingqinamba yabantu besifazane enkulu ukwesela, ukugqoza kwamathuba emisebenzi, ukuhlukunyezwa kwabantu besimame kanye nophuzo oludakayo nezidakamizwa emantombazaneni asakhula.
Unxuse izinhlaka zikaHulumeni kanye nezinkampane ezizimele ukuba zilethe izinhlelo ezindaweni zemaKhosi zokuthuthukiswa kwabesifazane. ube esephetha ngokuthi angafisa ukuthi kube nezinhlelo zokuqeqesha oNdlunkulu nokubacija ngamakhona okukwazi ukulekelela ukukhulisa nokuthuthukiswa komphakathi kuphindwe kube nezithangami zokuhlangana bengoNdlunkulu ukuze bakwazi ukudingida izindaba zabantu besifazane emakhaya njengoba kwenzeka eMakhosini.
Okusicacelile kwinkulumo yethu noNdlunkulu uMandlovu ukuthi ubuholi beMbokodo ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya bubalulekile futhi buyadinga ukwesekwa njengoba ziningi izingqinamba ezikhona kepha sithanda ukubetusa oNdlunkulu ngemisebenzi yabo abayenzela isizwe….. sithi abaqhubeke njalo Halala Mbokodo.